March 14, 2019 ညနေဖန်တီးသူ ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကုများနှင့်ကျန်းမာ 0
ဝဘ် ..: http://www.sinn-seelenintelligenz.com
အီးမေးလ်က : info@sinn-seelenintelligenz.com
ဝဘ် ..: http://www.stephan-josef-glaser.com
အီးမေးလ်က : info@stephan-josef-glaser.com
အိုင်တီသတင်း, ဆော့ဖျဝဲ dev အပေါ် NewMedia နှင့်သတင်း
အွန်လိုင်းနယူး Trends, Mode ကို Trends und လူနေမှုပုံစံ
Neues zu Organspenden – ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကုများနှင့်ကျန်းမာ
BAG-Urteil: Arbeitgeber muss auf Verfall von Urlaub hinweisen
ရှယ်ယာ ရှယ်ယာစျေးနှုန်း နိုငျငံခွားငှေလဲစြေးကှကျ အော်တို အော်တိုသတင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း တောက်ပသော Börse အပြန်အလှန်သတင်း ကွန်ပျူတာ န်ဆောင်မှုများ ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ္ဍာရေး အချိန်အား ပိုက်ဆံ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာခြင်း ရှေ ကုန်သွယ် အဆင်သင့်သော ဝါသနာ အိမ်ခြံမြေ ရာထူး ယဉျကြေးမှု အတတ်ပညာ လူနေမှုပုံစံ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆေးဝါး mode ကို သတင်း အမှန်တကယ်သတင်းများ သတင်းသတင်း နိုင်ငံရေး မှန်သော ခရီးသွား ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခေတ်ရေစီးကြောင်း ကုမ္ပဏီ ယာဉ်အသွားအလာသတင်းအချက်အလက် နောက်ထပ်ပညာရေး ကျန်းမာ ပရိုမိုးရှင်းထုတ်ကုန်များ ကြော်ငြာ စီးပွားရေးကို
ဆိုက်သင်၏ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း, သငျသညျ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုရန်သဘောတူ. ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဤ website ပေါ်တွင် cookie ကို setting များကိုမှာ "cookies များကိုခွင့်ပြု" ပြုပြင်, အကောင်းဆုံးကို surfing အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ဖို့. သငျသညျ cookie ကို setting များကိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲဒီ website ကို အသုံးပြု. နေတယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် "accept" ကလစ် နှိပ်., သငျသညျသဘောတူရှင်းပြ.